Oromiyaa keessatti tooftaalee Bobbaa waraana Eertiraa(Shaabiyaa)!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa keessatti tooftaalee Bobbaa waraana Eertiraa(Shaabiyaa)!!
Oromiyaa keessatti tooftaalee Bobbaa waraana Eertiraa(Shaabiyaa)
1. Loltooni WBO adamsuuf bobbaafaman meeshaa akka malee ammayyawaa kan qaaan yoo ta’u, marga fi baala mukaa ofittii diruun mukaa fakkatani bobba’aa akka jiran beekameera. Tooftaa kana warri bosona keessa sakata’aaf socho’u hundi akka fayyadamu jedhamee jira.
2. Suuralee iddoowwan gara garaa mu’lisu kan kana dura miseensoni WBO suuraa itti ka’aani social midea gubbaa asii achi deemaa ture irraa haalan xiinxaluun bakka baayyee addaa baafataniruu. Sochiin isaani GPS irratti guutamuun bakkeewan kana irrati xiyyeeffate jedhamee jira.
3. Teeknolojii fi loogistikii waraana Iizii dhihaa akkaa jirutti gara sakatta’iinsaa fi lola WBOti dhimma ba’uuf murtoon darbee jira. Kana jechuun Teeknolojii fi loogistikii hidhaa Abbayaalee ittiin eegaa turan baayyee isaa gara sanati fayyadamuuf sochoosani jiru.
4. Sochii WBO salphaati addaa baafachuuf Kameerawwaan fi Manatsarii waraanaa Israa’el irraa argatan garas qabatani deemaa jiru.
5. Meeshaa Bireenii rasaasaa saanduqaan baatu fudhatani deemaa jiru. Team tokko keessatti(Sagaliin tokko) bireenii 4 qaba.
6. Isnayipeerii guguddaa KM 2 irratti rukutuufaa kan qabatanis keessa jiru. Kana malees Diishqaa 7KM irratti rukkutu harkaa qabu.
7. Yoo WBO lafa diriiraattii ba’eef helikoptariin guyyaa rukkutuuf ‘standby’ ta’aniru.
8. Bakka tokko tokkooti kallattiidhaan WBO irratti waraana banuu isaani dura nyaataa fi dhugaatii irraa kutuun achi booda erga dadhabsisaani bodee humna cimaadhan akka itti bahanii lolan kalattiin kaahameefii jira.
9. Akka Siyyum Masfiinfaa ajjeesan san Jaal Marroo dabalatee carraa argannaan hoggaantootaa WBO ajjeesuufis ergamni cimaan itti kennamee jira.
10. Hanga waraanni kun dhumuttii namni tokkoo illee suuraa ka’ee maxansuu fi vidiyoo waraabee maxansuu itti fufa taanan salphaati bakka san addaa basuun sadarkaa itti duuluun danda’amurrati hojiin hojjatamee jira.
11. WBOn yoo waraana kana injifaate ykn yoo lubbuu namootaa xiqqoon qofaa aarsaa godhee waranicha xumure yeroo muraasaa keessatti biyyattii to’aachuu waan danda’uuf waraanni kun kan akka ijjibbaataa isaa dhumati. Baajataa guddaa fi beekumsaa guddaan qophahee bobbafamera.
12. Nama rifeensa isaa guddifatee socho’u hunda yeroo argan ni shakku taanaan gaaffii tokko malee itti dhukaasanii akka ajjeesan itti himamee wan jiruuf uummani fi qeerroonis akka of eggaannoo cimaa godhan haa ta’u
(A4O, April 5, 2021) በአንድ ወረዳ ብቻ በአማራ ልዩ ሃይል የደረሰው ጥቃት!